🥇 ▷ 3 Italia: waa kuwan liiska qiimaha cusub ee iibka iibsiga ee 'Honor 9 Premium' iyo 6A Pro oo ay la socdaan ALL-IN iyo Play 25 ✅
3 Italia: waa kuwan liiska qiimaha cusub ee iibka iibsiga ee ‘Honor 9 Premium’ iyo 6A Pro oo ay la socdaan ALL-IN iyo Play 25
Laga bilaabo maanta, 3 Italia waxay cusbooneysiisay qiimayaasha iyo qaababka lacag bixinta qaybo ahaan Mudane 9 Premium waa 6A Pro, oo lagu daray dalabyada taxanaha ah DHAMMAAN-IN waa Ciyaar. Aynu dib u eegno faahfaahinta oo dhan.
Mudane 9 Premium
DHAMMAAN-IN shahaadada Masterka: 30 qaybood oo ah € 16.50 bishii (oo ay kujirto € 7.50 oo ah qiimaha dalabka) oo ka hor imanaya € 49 isla markaana aan lahayn wax kama dambeys ah. Habka lacag bixinta: kaarka deynta iyo maalgelinta Compass.
DHAMMAAN-IN shahaadada Masterka: 30 qaybood oo ah € 13.50 bishii (oo ay kujirto € 7.50 oo ah qiimaha dalabka) oo ka soo horjeedda € 169 oo aan lagu bixin wax kama dambeys ah. Habka lacag bixinta: koontada hubinta.
DHAMMAAN-IN Awood: 30 qaybood oo ah € 19.50 bishii (oo ay kujirto € 12.50 qiimaha dalabka) oo ka hor imanaya € 49 iyo iyada oo aan la bixin wax kama dambeys ah. Habka lacag bixinta: kaarka deynta iyo maalgelinta Compass.
DHAMMAAN-IN Awood: 30 qaybood oo ah € 18.50 bishii (oo ay kujirto € 12.50 oo ah qiimaha dalabka) oo ka soo horjeedda € 169 oo aan lagu bixin wax kama dambeys ah. Habka lacag bixinta: koontada hubinta.
Ciyaar 25: 30 qaybood oo ah € 16 bishii (oo ay kujirto € 9 oo ah qiimaha dalabku) oo ka hor imanaya € 29 oo aan lahayn qaybsi kama dambeys ah. Habka lacag bixinta: kaarka deynta.
Ciyaar 25: 30 qaybood oo ah € 15 bishii (oo ay kujirto € 9 oo ah qiimaha dalabka) marka loo eego horudhaca € 169 iyo iyada oo aan la bixin wax kama dambeys ah. Habka lacag bixinta: koontada hubinta.
Mudane 6A Pro
DHAMMAAN-IN shahaadada Masterka: 30 qaybood oo ah 11.50 euro bishii (oo ay kujirto € 7.50 qiimaha dalabka) oo ka soo horjeedda hore oo ah € 29 iyo iyada oo aan la bixin wax kama dambeys ah. Habka lacag bixinta: kaarka deynta.
DHAMMAAN-IN shahaadada Masterka: 30 qaybood oo ah 11.50 euro bishii (oo ay kujirto € 7.50 oo ah qiimaha dalabka) oo ka hor imanaya € 49 oo aan lahayn wax kama dambeys ah. Habka lacag bixinta: koontada hubinta.
DHAMMAAN-IN Awood: 30 qaybood oo ah € 15.50 bishii (oo ay kujirto € 12.50 oo ah qiimaha dalabka) oo ka hor imanaya € 29 isla markaana aan lahayn wax kama dambeys ah. Habka lacag bixinta: kaarka deynta.
DHAMMAAN-IN Awood: 30 qaybood oo ah € 15.50 bishii (oo ay kujirto € 12.50 qiimaha dalabka) oo ka hor imanaya € 49 isla markaana aan lahayn wax kama dambeys ah. Habka lacag bixinta: koontada hubinta.
Ciyaar 25: 30 qaybood oo ah € 13 bishii (oo ay kujirto € 9 oo ah qiimaha dalabka) marka loo eego hor u kaca € 29 oo aan lahayn qaybsi kama dambeys ah. Habka lacag bixinta: kaarka deynta.
Ciyaar 25: 30 qaybood oo ah € 13 bishii (oo ay kujirto € 9 oo ah qiimaha dalabku) oo ka hor imanaya € 49 oo aan lahayn qaybsi kama dambeys ah. Habka lacag bixinta: koontada hubinta.
Sida dalabyada DHAMMAAN-IN, waxaa jira a lacagta firfircoonaanta oo ah: € 3 (halkii laga isticmaali lahaa € 52, haddii la joogo ugu yaraan 30 bilood) macaamiisha cusub ee fuliya xaddidooda tirada; € 9 (halkii laga isticmaali lahaa € 58, haddii ay jirto sii joogitaan ugu yaraan 30 bilood) macaamiisha cusub ee abuureysa lambar cusub; oo ah 39 € (halkii laga isticmaali lahaa 88 €, haddii ay sii jirto ugu yaraan 30 bilood) macaamiisha horey u jirtay.
Wixii dalabyo ah Ciyaar 25 ah lacagta firfircoonaanta waa € 9 macaamiisha cusub, € 0 waxaa la siiyaa kuwa leh habab lagu bixiyo qaababka lacag bixinta iyo € 39 oo loogu talagalay dhammaan isticmaaleyaasha kale. Intaa waxa u dheer, waxyaabaha la soo bandhigo waxaa ka mid ah Kaarka buluuga ah ee shineemada Grande 3 waa 6 bilood Apple Music, halka ikhtiyaarka lagu daray oo keliya dalabyada DHAMMAAN-IN-IN Bangiga Giga.